छाउगोठ भत्काउँदैमा छाउपडी ‘कुप्रथा’को अन्त्य हुन्छ ?
You are at:Home»बिचार»छाउगोठ भत्काउँदैमा छाउपडी ‘कुप्रथा’को अन्त्य हुन्छ ?
By bktnews Posted on	 January 10, 2020 बिचार
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा धमाधम छाउगोठ भत्काउने काम भइरहेको छ । राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि छाउगोठ भत्काउनमा व्यस्त छन् ।
के छाउगोठ भत्काउँदैमा छाउपडी कुप्रथाको अन्त्य हुन्छ त रु भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रश्न स्वभाविक छ, किनभने यसअघि पनि छाउगोठ पटक पटक भत्काइएकै थिए । खै१ त छाउपडी प्रथा हटेको ?
मुगुका सांसद गोपाल बम छाउपडी गोठमा बस्नु कतिपयको बाध्यता भएको भन्दै गोठ भत्काउनु पहिले बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘गरिबीको कारण पनि धेरैजसो दिदीबहिनी घरमा बस्न सकेका छैनन् । सानो घरमा सबै परिवार अटाउनु पर्छ । यस्तो बेलामा कसरी अर्को कोठा खोज्ने ?’
अहिले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु भएको हो । तर छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिने गृह मन्त्रालयले जनचेतनाको लागि के गर्‍यो त ? मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो काम बजेट लिएर गाउँमा गएर सचेतना दिने हैन । त्यस्तो गर्न हामीसँग बजेट पनि छैन । हामीले गर्ने भनेको प्रहरी, स्थानीय र यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थासँग समन्वय गर्ने र ‘यसो गर !’ भनेर सम्झाउने हो ।’
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा छाउपडीसम्बन्धी जनचेतनाका लागि एक पैसो खर्चेको छैन । मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमको अछाम, डोटी, बाजुरा र बझाङमा छाउपडी अवस्थाको अनुगमन गर्‍यो । यस्तै स्कुलमा पढाइने पाठ्यपुस्तकमा यो विषयलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल पनि गर्‍यो । यति कामले जनचेतना पुग्छ त रु